Soo dejisan F-Secure Anti-Virus 17.7 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: F-Secure Anti-Virus
F-Secure Anti-Virus – waa software si looga hortago noocyada casriga ah, kuwa cusub iyo kan khatarta ah. Antivirus waxay bixisaa heerka lagama maarmaanka ah ee ammaanka kombuyuutarka iyadoo la ogaanayo astaanta saxda ah ee saxda ah. F-Secure Anti-Virus wuxuu taageertaa jeegga kombiyuutarka oo buuxa iyo sheyga xulashada qaybo nugul ee nidaamka ka dibna soo saaro ama dib u dejiyo kuwa soo duubay si loo karantiro. Kumbuyuutarku wuxuu kormeerayaa nidaamyada aan la garanayn oo falanqeynaya habdhaqanka faylasha iyo codsiyada, kuwaas oo u badan inay ka difaacaan hanjabaadaha aan la garanayn iyo xakamaynta falalka khatarta ah ee codsiyada. F-Secure Anti-Virus wuxuu isticmaalaa dab-damis aasaasi ah oo Windows-ka ah kaas oo ka hortagaya codsiyada qalabka ka soo duubaya faylasha xaasidnimada ah ee internetka oo ka dhigaya mid aan suurtagal ahayn codsi laga shakiyo si loo helo websaydhka caalamiga ah iyada oo aan fasax laga haysan. F-Secure Anti-Virus sidoo kale wuxuu kormeerayaa qaybo fara badan oo loogu talagalay isbeddelka suurtagalka ah ee khatarta ah ee ay sameeyaan ransomware waxayna u oggolaan karaan oo keliya codsiyada sugida si ay u helaan galalka ilaalinta.
Badbaadinta bini’aadanka oo kordhay
Falanqaynta habdhaqanka faylasha iyo barnaamijyada
In la ogaado isbeddelka suurtagalka ah ee khatarta ku jira nidaamka
Isku xidhnaanta isku xirka internetka
Soo dejisan F-Secure Anti-Virus
Faallo ku saabsan F-Secure Anti-Virus
F-Secure Anti-Virus Xirfadaha la xiriira